Mareykanka oo la sheegay inuu ku habbooneen dadka magangalya doonka ah | Hangool News
Mareykanka oo la sheegay inuu ku habbooneen dadka magangalya doonka ah
Hangoolnews:- Maxkammad federaal oo ku taala Canada ayaa go’amisay heshiis magangalyada dalkaasi la lahaa Maraykanka waxayna sabab uga dhigtay in maraykanka uu ku xadgubo xuquuqda aadanaha ee qaxootiga.
Heshiiska dalka seddexaad ee Nabdoon ee shaqeynayay tan iyo sanadi 2004tii ayaa qaxootiga u ogolaanayo inay Magangalyo weydistan dalka nabdoon ee ugu horeeya ee ay gaaran.
Laakiin Arbacadii, xaakinka Maxkammada ayaa ku dhawaaqay in heshiiskan ahayn mid dastuuri ah iyada oo ay ugu wacan tahay in Mareykanka uu xidho muhaajiriinta.
Go’aanka ayaa guul weyn u ah dadka u dhaqdhaqaaqa socdaalka Canada.
Canada ma waxa ay wajahaysaa ‘halis’ kaga imanaysa Shiinaha iyo Ruushka?
Qareenada Qaxootiga laga celiyay xuduuda Canada ayaa heshiskaasi maxkammada la tigsaday waxyna ku doodayeen in maraykanka uusan kamid ahayn dalalka nabdoon ee magangalyo loo raadsan karo.
Nedira Jemal Mustefa, oo kamid ah qaxootiga ku qasabanaaday inay joogan maraykanka ayaa maxkammada ka hor sheegtay intii Maraykanka ku xirnayd ay noolal adag oo argagax, go’doon taasna ay maskaxiyan saameyn ku yeelatay noolasheeda.
‘Waxaan wada ognahay qaabka uu Mareykanku ula dhaqmayo dadka magangalyo-doonka”. Ayay tiri Maureen Silcoff oo ah Gudoomiyaha ururka qareenada qaxootiga u dooda mar ay la hadlaysay wakaalada wararka ee Reuters.
Xuduuda Markanka iyo Canada oo gaaraysa 5,525 mayl (8,891 Km) ayaa ah xadka ugu dheer ee labo dal ay wadaagan caalamka.
Tan iyo sanadii 2017kii markii Madaxweyne Trump xafiska la wareegay oo u wacad ku maray in uu bilaabi doono howlgal ka dhan ah muhaajiriinta ayaa waxaa xadka Canada iyo Maraykanka wadagaan ka talaabay 58kun oo qof kuwaas oo qaxootinimo isu dhibay.
Canada waxayintaasi dhageysanaysay codsiyadooda magangalyo illaa markii uu caalamku ku habsaday cudurka safmarka ee coronavirus, markaas oo dowladda Canada ay sheegtay in dib loo celin doono.